SI AAD U NOQOTO HOGGAAMIYE GUULAYSTA WAA INAAD TAQAAN WADDADA LOO MARO GUUSHA (FAALO) -
Guushu iyo guul daridu waa laba is bar bar taala in kastoo binu;aadanku uu jecel yahay inuu ahaado mar walba midka guulaysta isagoo ka cararaya in marnaba lagu yiraahdo waad guulaysatay ama hawshii aad haysay waa ay fashilan tay.
Guul daridu waa cashir ay tahay in wax badan laga barto si loo gaaro waxa aad ku hamminayso nooshaha Guul inaad ka gaarto sidii aad u horumarin lahayd Noloshaada iyo tan Mujtamaca aad la nooshahay, haddiise aad ku harto guul darro mar keliya ah xaqiiqdii gaari maysid hadafkii aad nolosha ka lahayd.
In badan ayaan maqalnaa Xukuumad hebel way fashilantay, hoggaamiyaha xukuumaddaas ayaa fashilmay iyo ereyo kale oo badan oo taa la micna ah, halka sidoo kale aad maqashaan hebel Nolosha ayuu ka dhacay oo qudheeda loo fasiri karo inuu Ruuxaasi uu guul daraystayt halkaana uu ku haray kagana haray Nolosha iyo Imtixaanada ka hor imaanaya inta nololi jirto.
Qoraha faaladani waxa uu leeyahay Qormadaydan maanta ee aan hal ku dhigga uga dhigay SI AAD U NOQOTO HOGGAAMIYE GUULAYSTA WAA INAAD TAQAAN WADDADA LOO MARO GUUSHA ayaan waxaan ula jeedaa hogaamiyaashii soo martay dalkeena soomaaliya wixii ka danbeeyay burburkii Xukuumadii dhexe oo dhamaantoodba ahaa kuwo ku guul dareystay hogaaminta Shacabka Soomaalida.
Sababta aan sidaa u leeyahay ayaa waxa ay tahay mudo 27 sano ah ayaa la la’yahay Maamuyl hagaagsan, Shacab midasan, kala danbeyn dowladnimo, Hogaamiye daacad ah iyo siyaasad jiha Toosan leh marka laga yimaado khilaafkii iyo is qab-qabsigii siyaasadeed ee ragaadiyay siyasadii dalkaan oo noqotay mid ku dhisan isu quurid la’aan iyo quursi aan dhamaanaynin oo uu qabiilku saldhig u yahay.
Marka aynu eegno madaxda Caalamka waxa jira hogaamiyaal fara badan oo ku fashilmay hogaaminta dalkooda ka gadaal markii ay ka lumen wadada loo maro guusha waxaa isaguna iminkan qar-qarsi ku taagan hogaamiyaha Mareykanka Donald J Trump oo la dhihi karo wuxu hayaa wadadii guul darida isagoo mudadii halka sano ee talada dalkaasi hayay ee ay isaga dhex rafteen siyaasadihii arimaha gudaha iyo tii caalamka.
Dalkeena Soomaaliya marka aan u soo noqdo waxa kajira Madaxweyne Maamul; Goboleedyo iyo Madaxweynaha Qaranka, taasoo jahwareer ku riday shacabkii Soomaaliyeed oo jagada madaxweyne u bartay ninka dalka xukumo waxayse la yaabanyihiin isaga mooyee 5 Madaxweyne oo kale waana taa wadada guul daradi oo weli shacabka Soomaaliyeed ee cagta ku hayaan.
Si hadaba aad u noqoto hogaamiye guulaysta waa inaad wax ka barataa wadad loo maro guusha adigoo raacaya tusaalooyinikan
A. In aad tahay Hogaamioye daacad ah, Caadil ah, isku kalsoon
B. In aad leedahay awood hogaamineed, dulqaad, go’aan geesinimo.
C. In aad tahay hogaamiye leh aragti fog, aqoon siyaasadeed iyo dareen wadaniyadeed
D. In aad tahay Hogaamiye ku kalsoon shacabkiisa, Mas’uuliyiinta la shaqeysa iyo xiriirka beesha caalamka.
Ugu danbeyntii taloyinkaan ma ahan kuwo ku gooni ah Hogaamiyaashee waa dariiq u furan qof kasta oo doonayo in uu ku guulaysto Nolosha si uu u gaarana guushaas waa isago qaata talooyinkaas.
Faaladan W/Q: Weriye Aadan Macalin Aadaamow
Related Items:Featured, SI AAD U NOQOTO HOGGAAMIYE GUULAYSTA WAA INAAD TAQAAN WADDADA LOO MARO GUUSHA (FAALO)
Madaxweyne Farmaajo oo Amaankiisa Aad loo Adkeeyey